Mid Kamida Maayiradda Degmooyinka Dalka Kamaroon Oo La Dilay. |
Mid Kamida Maayiradda Degmooyinka Dalka Kamaroon Oo La Dilay.
Duqii magaaladda Nowa Komuunu oo ku taala Waqooyi Galbeed ee dalka Kameroon laguna magacaabi jiray Najuf Looma Dheefidh ayaa lagu dilay degaankaasi , sida uu cadeeyey Badhasaabka gobolka Dunga Matunga Duja Matunga.
Warka dilka Maayirkan oo laga baahiyey idaacadda Radio Afrika 1 ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in ay dilkaasi geysteen kooxaha gooni u goosadka ah ee Amba Boyis oo ka dagaalama gobolkaasi Waqooyi Galbeed Kameroon oo lagaga hadlo luuqadda Ingiriisida.
Dilkan ayaa wararku sheegayaan in ay geysteen laba qof oo aan ilaa hadda la garanayn, waxaanay ciidamada dalkaasi sheegeen inay hadda wadaan baadhitaan ku saabsan sidii dilkaasi u dhacay iyo cidii dilkaasi geysatay , waxaan degaankaasi ku dagaalamaayey maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dalka Kameroon iyo kooxaha goonis u goosadka ah ee Amba Boyis .